विविध Archives - शोलुसन
एजेन्सी : विश्‍भर मानवीय हताहती निम्त्याइरहेको कोरोना महामारी संक्रमण जीवजन्तुमा पनि देखिन थालेको छ। अमेरिकको न्युयोर्कस्थित ब्रोङ्कस चिडियाघरमा राखिएकी चार वर्षीया बाघिनीालई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। लगातार सुख्खा खोकी खोक्न थालेपछि बाघिनीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको सीएनएनले जनाएको छ। पशु चिकित्सकहरुले चिडियाखामा रहेका अन्य पाँच बाघ र सिंहहरुको पनि नमुना लिएका छन्। […]
बिहीबार राती आकाशमा देखिएको चम्किलो वस्तु उल्कापिण्ड हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले गए राती प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली आकाशमा देखिएको चम्किलो वस्तु उल्कापिण्ड हुन सक्ने बताएका छन्। ‘साँझ करिब ८ बजे तिर नेपाली आकाशमा केही चम्किलो वस्तु सँगसँगै आवाज पनि सुनिएको भन्ने सूचना हाम्रो फेसबुक पेजमार्फत प्राप्त भएको छ,’विज्ञप्तिमा […]
संसारको कुनै कुनामा अपराध बढिरहेको छ भने कतै स्वात्तै घटेका पनि छन् । यद्यपी, एउटा युरोपेली देश यस्तो पनि छ जहाँ अब एकजना पनि त्यस्ता अपराधी छैनन् जसलाई जेलमा राख्न सकियोस् । यति पढिसक्दा पनि तपाईंलाई विश्वास लागिरहेको छैन होला तर धर्तीमा एउटा यस्तो पनि देश छ जहाँका जेल खाली छन् । पश्चिमी युरोपेली देश […]
एजेन्सी । एक व्यक्तिले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने डरले श्रीमतीलाई बाथरुममा थुनेका छन् । एक चिनियाँ महिलालाई भेटेपछि श्रीमतीलाई कोरोना भाइरस लाग्यो कि भन्ने डरले ती व्यक्तिले यस्तो गरेको बताइन्छ । बाथरुममा थुनिएपछि श्रीमतीले पुलिसलाई फोन गरेकी थिइन् । त्यसपछि पुलिसले उनीहरु बसिरहेको अपार्टमेन्टमा आएर महिलालाई छुटाए । श्रीमान्ले डाक्टरसँगको कुराकानीपश्चात् बाथरुममा बन्द गर्ने निर्णय […]
एजेन्सी । विश्वव्यापीरुपमा त्रास फैलाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को डरले मानिसहरुको मनमा डेरा जमाएको छ । के भगवान पनि कोरोना भाइरससँग डराउँछन् ? भारतमा एउटा आश्चर्यजनक घटना सामुन्ने आएको छ । वाराणसीको एक मन्दिरमा शिवलिङ्गमा नै मास्क लगाइएको तस्विर सार्वजनिक भएको छ। मन्दिरका पुजारी कृष्ण आनन्द पाण्डेले भाइरसको संक्रमणको त्रास बढेको भन्दै भगवान विश्वनाथको अनुहारमा […]
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने दुइटा उपाय छन्— कसैसँग हेलमेल नराखी घरभित्रै बस्ने र पटक–पटक साबुनपानीले हात धुने। अब प्रश्न उठ्छ, साबुनपानीले हात धुँदा भाइरस संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउने व्यक्ति को हो? तपाईंहरू गुगल चलाउनुहुन्छ भने याद गर्नुभएको होला, केही दिनअघिसम्म गुगलले आफ्नो होमपेजमा जुँगा भएका, कपाल खुइलिएका एक व्यक्तिको तस्बिर राखेको थियो। त्यही […]
सञ्चारकर्मी गोमाको कोराना भाइरस सम्बन्धि चेतनामूलक गीत
लोक तथा दोहोरी गायक नरेश खाती र गायिका एलिना चौहानको आवाजमा कोरोना भाईस बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । पत्रकार गोमा परियारको शब्द तथा गायक स्वयं खातीको संगीत रहेको कोरोना भाईरस गीत जनचेतनामुलक गीत हो । चिनको बुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाईरसले अहिले विश्वभरी महामारीको रुप लिएको छ । हालसम्म १८८ मुलुकमा देखा परिसकेको कोरोना […]